खुशिको खबर! ग्रेटर नेपाल फिर्ता! भारतीय बिज्ञले नै ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्नु पर्छ भनेपछि, भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै) – Nepali in Australia
June 5, 2021 autherLeaveaComment on खुशिको खबर! ग्रेटर नेपाल फिर्ता! भारतीय बिज्ञले नै ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्नु पर्छ भनेपछि, भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै)
संसारकै मोटो भनेर चिनिने १ सय ९३ किलो भएका एक बालकले एक सय ८ किलो तौल घटाएका छन् । उनले २०१६ बाट तौल घटाउन सुरु गरेका थिए ।
इन्डोनेसिया जन्मिएका आर्या परमाना नाम गरेको मोटो बालकको तौल घटाएको तस्वीर अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । उनले आफ्नो तौल घटाउन कडा परिश्रम र मेहनत गरेको जनाएको छ ।